ပြောင်း နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ (NZD) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ (NZD)
ပွောငျး နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ (NZD)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ (NZD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: နယူးဇီလန်. နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ.
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.66နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ယူရိုEUR€0.56နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.506နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.603နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr5.96နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.17နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč14.74နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.47နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.884နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.923နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$14.78နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$5.12နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3.59နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹49.51နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.111.52နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.906
နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿20.62နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥4.6နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥69.96နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩785.28နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦255.46နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽48.68နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴18.31
နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ BitcoinBTC0.00006 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ EthereumETH0.00169 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ LitecoinLTC0.0116 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ DigitalCashDASH0.00681 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ MoneroXMR0.00711 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ NxtNXT48.03 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ Ethereum ClassicETC0.0954 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ DogecoinDOGE188.92 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ZCashZEC0.00722 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ BitsharesBTS25.3 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ DigiByteDGB22.52 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ RippleXRP2.29 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ BitcoinDarkBTCD0.0226 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ PeerCoinPPC2.16 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ CraigsCoinCRAIG298.36 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ BitstakeXBS27.92 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ PayCoinXPY11.43 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ ProsperCoinPRC82.14 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ YbCoinYBC0.000352 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ DarkKushDANK209.95 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ GiveCoinGIVE1417.27 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ KoboCoinKOBO147.54 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ DarkTokenDT0.608 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD သို့ CETUS CoinCETI1889.6
40 SGD to PLN2020-08-09 19:22:04
250 BTC to USD2020-08-09 19:21:14
1 TIT to NGN2020-08-09 19:21:07
2400000 PINK to NGN2020-08-09 19:18:16
500 USD to BTC2020-08-09 19:09:48
400 USD to BTC2020-08-09 19:08:24
24 ARN to THB2020-08-09 19:08:18
200 SGD to USD2020-08-09 19:07:43
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 19:20:02 +0000.